Maraoka: Herinandron’ny ”Vao Sambany” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2017 7:59 GMT
Tamin'ity herinandro ity, tao amin'ny tontolon'ny bilaogy amin'ny teny anglisy ao Maraoka, dia resahana be ny mikasika an'i Rachida Dati, ilay sambany minisitry ny fitsarana frantsay manana fiaviana teratany afrikana tavaratra, nandray ny andraikiny tamin'ny 18 Mey 2007. Mpitsara 41 taona i Rachida Dati, Maraokana ny rainy, ary miteraka fanehoankevitra maro ny fanendrena azy. Amin'ny lafiny iray, manaporofo izy fa afaka ny ho tafita ao Frantsa ny vitsy an'isa, fa, toy ny marihan'i Liosliath [En] « Tsy ho tafiditra tao Frantsa mihitsy ny Ray aman-dRenin'i Ramatoa Dati raha ireo lalàna vaovao naroson'i Nicolas Sarkozy, ary iray amin'ireo antony mahatonga ahy hahita azy ho toy ny mpihatsara ivelantsihy izany. Nanenjika an'i Nicolas Sarkozy nandritra ny taony maro izy, niangavy azy mba hanaiky azy ho ao amin'ny ekipany – mazava ho azy, voaloton'ny fieboeboany sy ny fikasàny ny fitondrantena ara-maoraly raha ny aminy no jerena ».
Mitatitra ny fanehoankevitr'ireo Maraokana manoloana ny fanendrena an'i Rachida Dati ny The view from Fez [En].
Raha toa ka ny maro, tao Frantsa, dia nitehaka ny nahatafiditra an'i Rachida Dati ho ao amin'ny fitondràna ka lasa Minisitry ny fitsarana, nifangaro kosa ny fanehoankevitr'ireo Maraokana sy olona maro tao anatin'ny vondrom-piarahamonina Frantsay ao Maraoka : « Tsy manana traikefa izy ary ho famenoana tahirintsary fotsiny no maha-eo azy» hoy ny nosoratan'ny mpitsikera iray maneso.
Manontany tena aloha i Maghrebism [En] ”Fa maninona no tsy afaka miombon-kevitra amin'i Sarkozy ny zanaka mpifindra monina iray?”. Avy eo miaro an'i Rachida Dati ilay blaogera, amin'ny fanoratana hoe.
Rachida Dati, amin'ny maha-olona sy zanaka mpifindra monina azy, dia manana tanteraka ny zo hifampizara fijery politika miaraka amin'i Sarkozy. Ary manan-jo i Sarkozy hanendry azy, tsy azo ampangaina ho mitady olona atao fialantsiny fotsiny. Angamba mety ananany ireo antony mitovy azo hanavahana azy mitovy amin'ireo antony nanendreny ny mpanao politika avy amin'ny havia. Noho ny traikefany sy ny fahaizany. Fa sarotra ny mino izany ho an'ireo mpifindra monina sy ireo avy amin'ny havia. Izy ireo irery ihany no afaka manolotra mpifindra monina tena izy amin'ny politika. Saribakoly, mpamadika, na olona tsy tomombana ara-tsaina daholo ireo hafa sisa rehetra .
Mahatsikaiky sady maneritery izany fanompoana sampy izany. Fotoana izao tokony hahatsapantsika fa tsy mitovy avokoa ireo «andian-taranaka roa » rehetra ireo. Hoe tsy mitovy ny soatoavintsika, na dia miara-dàlana aza isika.
Toa feno ”Vao Sambany” ity herinandro ity. Taorian'ny vaovao mikasika ny fanendrena an'i Rachida Dati, vaovao hafa, na, gazety moa izany, no nanao ny vaovao. Talohan'ity herinandro ity, ireo izay naniry ny hamaky vaovao momba an'i Maraoka amin'ny teny anglisy dia afaka nisafidy, na ny tranonkala tantanin'ny fanjakana, na ny tranonkala tohanan'i Etazonia. Miaraka amin'ny fanombohana ny The Casablanca Analyst, gazety tsy miankina mivoaka isan-kerinandro, tsy izany intsony ny zava-mitranga. Nanambara izany voalohany ny The View From Fez [En], ary manoratra hoe:
Dirhams efatra monja dia toa tsapan'ireo mpamaky fa nomena poezia, fanadihadiana, vaovao, fanehoankevitra sy famintsinana literatiora ireo mpamaky. Misy ireo sehatry ny gazety natokana ho an'ny vaovao Maraokana eny an-toerana, ho an'ny fanadihadiana ny vaovao iraisam-pirenena, miaraka amin'ny pejy editorialy. Kolontsaina, fiteny sy fifandraisana, literatiora, sns. Fifangaroana mahaliana ary manolotra ora famakiana sy fisaintsainana maro izany.
Midera izany gazety izany ihany koa ny The Morocco Report [En], mamoaka ny ampahany, ary manoratra:
Nahamarika ny mpianatro fa tena mangirika tokoa ireo mpanonta boky, ary tena miombon-kevitra amin'izany aho, fa izany fangirihana izany no ho ilain-dry zareo any amin'ny firenena izay na ireo gazety malaza indrindra aza tsy mahalafo afa-tsy gazety 100.000 monja (31 tapitrisa ny vahoaka maraokana) ary tena vitsy ny olona miresaka na mamaky ny teny anglisy.
Na izany aza, tena talanjona aho, satria sady tsy vitan'ny hoe hafa kely ireo lahatsoratra, fa toa matoky tsara ny finoany ireo mpanoratra, mampiseho ny heviny manokana toy ireo miozolmana, mpandala ny maha-olona, mpandàna filaminana, mpiaro tontolo iainana, tia tanindrazana, mpiaro ny marina, demokraty, mpitia ny literatiora sy ny zavakanto, mpikatroka ho an'ny fahalalahana no sady mpahay toekarena (tsy manaraka an'ity filaharana ity).
Ary ho an'ny ”Vao Sambany” farany, nizara lahatsoratra mikasika ny mety ho voalohany indrindra fivarotana divay tao Maraoka ny Cat in Rabat [En]
”Ny fisiany, eo amin'ity làlana manokana ity… ao amin'ity vohitra manokana ao Agdal ity… any Rabat… ao Maraoka, dia tena tsy mendrika toa ny masera karmelita ao anatina tobim-piofanan'i Al Quaida any ampototry ny tendrombohitr'i Afghanistan, nefa dia tena eo tokoa izy “.